जुटेन ओली–प्रचण्डबीच सहमति – सजल सन्देश
जुटेन ओली–प्रचण्डबीच सहमति
By Sajal sandesh	 On२३ पुष २०७६, बुधबार १०:२२
काठमाडौं – प्रतिनिधिसभाको बैठक पुस २७ गते दिउँसो १ बजेका लागि बोलाइएको छ । तर, बैठक बस्छ कि बस्दैन अझै टुंगो छैन ।यसअघि पुस ११ र १६ गते दुईपटक बैठक सूचना टाँस गरेर स्थगित गरिएको थियो ।
स्थगनको मुख्य कारण थियो, रिक्त सभामुख पदका विषयमा सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्रको वि,वाद । नेकपाले सभामुख नछानिसकेकाले २७ गतेको बैठक पनि अनिश्चित बनेको हो । किनकि नेकपाभित्र अझै सहमति बनिसकेको छैन ।पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादी केन्द्रले सभामुखमा दाबी छाडेका छैनन् ।
नेकपामा पूर्वएमालेबाट सुवास नेम्वाङ र पूर्वमाओवादीबाट अग्नि सापकोटाले सभामुखका लागि दाबी गरेका छन् । दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालले एक एक नेता बनाउनुपर्ने अडान राखेका छन् भने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको अडान वर्तमान उपसभामुख शिवमाया तुम्वाहाम्फेलाई नै सभामुख बनाउनुपर्ने रहेको स्रोत बताउँछ ।
उपसभामुख तुम्बाहाम्फेले पुस २७ गते आह्वान गरिएको बैठकले सभामुख निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाउने बताउँछिन् । तर, उनको अध्यक्षतामा सभामुख चयनको प्रक्रिया अघि बढ्ने सम्भावना न्यून रहेको नेकपाकै नेताहरु बताउँछन् ।
सत्तारुढ दल नेकपाका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ उपसभाुख तुम्बाहम्फेले राजीनामा नदिँदा सभामुख चयन प्रक्रिया अवरुद्ध बनेको बताउँछन् । “उपसभामुखले राजीनामा नदिँदा समस्या भएको छ । उहाँले राजीनामा नदिँदा नेकपाले उम्मेदवारी दिन पाउँदैन,” गुरुङ भन्छन्, “नेकपाले सभामुखमा उम्मेदवारी दिने कुरा टुंगो भइसकेको छ । सिटै खाली नभएको अवस्थामा पात्रका बारेमा कुरा भएको छैन ।”
संविधानले सभामुख र उपसभामुख फरक दल र लिङ्गको व्यवस्था गरेको छ । सो व्यवस्थाअनुसार उपसभामुख तुम्बाहाम्फेले नै रहँदा नेकपाले सभामुखमा उमेदवारी दिन मिल्दैन । उपसभामुखले राजीनामा दिएपछि मात्र नेकपाले सभामुखको उम्मेदवार तय गर्ने गुरुङले बताए । प्रमेख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले समेत नेकपाले सभामुखमा उम्मेदवारी दिने हो भने हालकी उपसभामुखको अध्यक्षतामा सभामुख चयनको प्रक्रिया अघि बढाउन नमिल्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई भेटेरै बताइसकेको छ ।
पूर्वमाओवादी अडानले ओली समस्या
उपसभामुख तुम्बाहाम्फेले नेकपा संसदीय दलले औपचारिक रुपमा आफुलाई राजीनामा दिन भनेमा मार्गप्रशस्त गर्ने बताइसकेकी छन् ।
औपचारिक रुपमा आफुलाई नेकपाले केही नभनेको उनी बताउँछिन् । उपसभामुखले मार्गप्रशस्त गर्न भने पनि किन अहिलेसम्म राजीनामा आएन त ? पूर्वमाओवादी केन्द्रका एक नेता भन्छन्, “पूर्व एमालेका साथीहरु सभामुख आफैसँग राख्न चाहनुहुन्छ । उपसभामुखले राजीनामा दिँदा पूर्वमाओवादी हाबी हुने हो कि भन्ने त्रास उहाँहरुमा छ । त्यसैले राजीनामा गर्न उहाँहरुले नै रोकिराख्नुभएको छ ।”
उता पूर्वएमालेलाई सभामुख दिँदा प्रधानमन्त्रीसमेत हावी हुन नसक्ने अवस्था आउने स्रोतको दाबी छ । सभामुखको विषयमा सहमति खोज्न नेकपाका अध्यक्षहरु पुष्पकमल दाहाल र ओलीबीच पटक–पटक छलफल भइसकेको छ ।
तर, पूर्वमाओवादीले यसअघि आफ्नो भागमा परेको सभामुख छाड्न नहुने अडान राखेपछि सहमति जुट्न सकेको छैन ।
स्रोतका अनुसार अध्यक्ष ओली पुर्वएमालेबाटै नेम्वाङलाई सभामुख बनाउन चाहन्छन् भने दाहालको जोड सापकोटालाई सभामुख बनाउने छ । सभामुखको विषयमा सहमति नजुटेपछि प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका पार्टी अध्यक्षलाई भेटेलगत्तै उनी आराम गर्ने भन्दै सापकोटाकै निर्वाचन क्षेत्र कदमबास पुगेका थिए ।
दाहालले सिन्धुपाल्चोक गएर ओलीलाई आफुले सभामुख नछाड्ने सन्देश दिन खोजेको दाहाल निकटस्थ बताउँछन् ।
इटहरीमा स्मार्ट पार्किङ्ग बन्दै, नेपालमा नै पहिलो प्रयोग !
मिटर ब्याजमा पैसा असुलेर किसानको उठिबास गराउने राजपाका केन्द्रीय सदस्य यादव प क्राउ